UNdlovu ufuna sisheshe isixazululo
U-OWEN Ndlovu uthi abameli bakhe bazobhalela iSABC ukuzama ukuthola isisombululo mayelana nomncintiswano weSong of the Year
FANELESIBONGE BENGU | January 8, 2020
UMSUNGULI weSABC Summer Song, u-Owen Ndlovu, uthi abameli bakhe bazobhalela iSABC bezame ukuxazulula umbango womncintiswano wengoma yokuhlukanisa unyaka ngokushesha.
Inhloko yemisakazo eSABC uNada Wotshela ikhuluma ezindabeni ngesonto eledlule ithe bazozama ukuxazulula lolu daba noNdlovu ngisho nangaphandle kwenkantolo.
UNdlovu wafaka iSABC enkantolo ethi umncintiswano wengoma yonyaka ngowakhe ngakho iSABC ayikwazi ukuwenza ngaphandle kwakhe. Lokhu kwaphoqa ukuthi ingamenyezelwa i-top 10 eyayivotelwe ngabantu kuKhozi FM. Udaba lwahlehliselwa uFebhuwari 10 eNkantolo eNkulu iSouth Gauteng.
“NgeSonto bengihlangene noDr 3 Seconds othe ubonile ukuthi iSABC ithi singalulungisa lolu daba ngaphandle kwasenkantolo. Uthe uzwile ukuthi kunabathi kumele ngibulawe yena ufuna ukugwema ukuchitheka kwegazi. Nami ngiyavuma, ngizimisele ukuthi sixoxe neSABC kodwa umuntu ovimbile manje wuMadoda Mxagwe (isikhulu esiphezulu seSABC) ofuna kuqhutshekwe nenkantolo. Nguye onamandla okuphikisa okushiwo nguNada Wotshela,” kusho uNdllovu.
Okhulumela iSABC, uMmoni Seapolelo esitatimendeni, uthe uNdlovu udukisa abantu ngokuthi uMxagwe ugcizelela ukuthi kuyiwe enkantolo ekubeni kunguye owafaka le nhlangano enkantolo.
Uthe udaba njengoba lusenkantolo akukho iSABC ezokwenza ngaphandle kwayo futhi abakaze bayiqale imizamo yokululungisa ngaphandle kwenkantolo. Uthe iSABC ibingakaze imthinte kodwa lizoshona elanamhlanje abameli bakhe sebeyibhalele besho ukuthi nabo abanankinga nokuthi kukhulunywe.
“Uma sivumelana mina icala ngizolihoxisa enkantolo kuphume imiphumela ngokushesha. Kulula ukusula icala akupheli ngisho usuku. Mina engikufunayo yinto yami engazisungulela yona. Ngiyavuma inkontileka iphelile njengoba besho yize besangikweleta unyaka kodwa ngifuna ukuthatha into yami ngikwazi ukungqongqoza kwezinye izindawo njenge-piano.”
Uthe uma sebehlangana uyobe ehamba nabameli bakhe futhi namalungu omphakathi avumelekile.